Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Soojiidashada Jasiiradda La Digue
Jasiiradda La digue
Iyada oo Iiddii Qiyaasta, oo sidoo kale loo yaqaan Lafet La Digue dadka maxalliga ah, ay soo dhowdahay, waxaan ku quusinnaa quruxda ceeriin ee jasiiradda.
Iiddii qiyaamaha, oo dadka deegaanku u yaqaanaan Lafet La Digue, waa dhacdo weyn oo indhaha oo dhan u jeedisa La Digue.
Dabaaldegyadu waxay dhacayaan dhowr maalmood iyada oo dhacdooyinka ugu waaweyn ay yihiin Ogosto 15, oo ay ku jirto baaxadda hawada sare ee “La Grotto” oo uu ka soo qaybgalo Bishop-ka Seychelles.
Baaxadda waxaa ku xiga socod dhaqameed iyada oo loo marayo waddooyinka La Digue ilaa Kaniisada St. Mary.
Dabbaaldegyadu waxay ku sii socdaan dhaqdhaqaaqyo dhaqameed, xaflad waddo iyo bandhigyo muusig oo toos ah oo ay la socdaan fannaaniinta maxalliga ah oo dhegaysanaya saacadaha dambe ee fiidkii. Iiddu ma dhammaystirmi doonto iyada oo aan laga helin meherado cunto oo soo bandhigaya cunnooyin kala duwan, gaar ahaan suxuunta hidde -dhaqameedka soo booqdayaasha. Lafet La Digue waa sawir firfircoon oo ku saabsan hab -nololeedka dhaqameed ee dadka Seychelles.
Ugu yar saddexda jasiiradood ee ugu waaweyn ee jasiiradaha Seychelles, Jasiiradda La Digue waxay caan ku tahay soo jiidashadeeda dhabta ah, rustic ah, oo qabata quluubta dadka safarka ah meel walba. Iyada oo jawigeedii dib loo dhigay, jasiiraddan yari saacaddu waxay dib ugu celisaa nolosha miyiga ee sahlan halkaasoo raadadka baaskiilka iyo raadku ay yihiin raadadka ugu caansan ee joogitaanka aadanaha.
Safar doon oo kaliya 20 daqiiqo ah oo ka yimid Jasiiradda Praslin, oo aan lahayn garoon diyaaradeed, La Digue waxay hoy u tahay qaar ka mid ah xeebaha Seychelles ee aan la dabargoyn sida caanka Anse Source D'Argent, oo ka mid ah xeebaha ugu sawirrada badan adduunka. Ku dabool xeebahaas luulka ah oo ay ku xardhan yihiin dhagaxa dhagaxa dhaadheer ee dhaadheer, kaas oo kaliya laga heli karo jasiiradan Badweynta Hindiya.
Jasiiraddan yari waxay dib u celisaa gacmaha waqtiga, waxayna ku siinaysaa dareen ah qaab nololeedka Seychelles kahor inta aan la gaadhin casriyeynta, taas oo ah mid kaliya lagu arko labada jasiiradood ee kale ee waaweyn. U qaado baaskiilkaaga xeebta L'Union Estate Park oo sahamin warshad dhaqameedka copra, halkaas oo saliidda qumbaha bikradda ah lagu soo saaray, oo ku dhex wareego canabka beeraha vaniljiga. Estate-ka ayaa sidoo kale hoy u ah guri beerista qaab-dhaqameedka Faransiiska-gumeysiga iyo qabuuraha loogu talagalay degsiimooyinka beeraha-vanilla-ka asalka ah.
Hoos u sii soco, dhammaadka L'Union Estate, waxaad arki doontaa adiga oo ku sii tallaabsanaya xeebaha cad ee luulka ah ee Anse Source D'Argent oo ay ku hareereysan yihiin biyo turquoise ah iyo dhagaxyo dhalaalaya. Geedaha timirta ah iyo dhirta cagaarka ah ee ku xeeran waxay kaliya kor u qaadaan quruxda meeshan qalaad, oo caan ku ah dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka labadaba. Xitaa waad ku soo fuuqi kartaa Il de Cocos oo aad u sixran oo dabayl-qabad leh oo ka hooseeya biyaha cad-cad oo u dhow yaababka nolosha badda Seychelles.
Raadka dabeecadda ee cagaarka emerald wuxuu kuugu soo dhoweyn doonaa dabeecadda si ka badan sidii hore oo aan kugu soo jiidanno kala duwanaanshaha noolaha ee firfircoon. Haddii aad nasiib leedahay waxaad xitaa ka dhex arki kartaa duuliyaha jannada dhifka ah ee ka mid ah takamaka iyo geedaha bodamier ee ku yaal meesha quduuska ah ee La Digue Veuve Reserve.
Qaabka dhabta ah ee jasiiradda, ku cun cagahaaga ciidda mid ka mid ah makhaayadaha xeebta ee jasiiradda ama ku qaniin qashin meel xeebta ku taal. Jasiiraddu waxay lahaan doontaa dhadhankaaga dhadhanka leh dhadhanka hodanka ah ee cunnada cunnada, iyadoo la adeegsanayo maaddooyinka ugu cusub oo ay ku jiraan cuntada badda ee ugu wanaagsan ee maxalliga ah. Xitaa waxaad la kulmi kartaa qaar ka mid ah kalluumeysatada maxalliga ah iyagoo ku jira birooyin alwaax ah ama waxaad ku qaadan kartaa miraha shaqadooda ul.
In kasta oo ay yar tahay oo xasilloon tahay, La Digue waxay qof walba u haysaa cajaa'ibyo yaab leh, oo ku reebaysa raad raagis leh soo jiidasho iyo soo dhoweyn diirran.